Sawirro Xubno katirsan Al-Shabaab oo lagu soo bandhigay Kismaayo – news
27 September 2020 Baarlamanka oo maanta yeelanaya kulan
26 September 2020 Taliyaha Booliska oo gaarey Baydhabo
26 September 2020 Khayre oo baaq kasoo saarey heshiiska doorashadda
Sawirro Xubno katirsan Al-Shabaab oo lagu soo bandhigay Kismaayo
Kismaayo ayaa sanadahaan dambe ka mid noqotay magaalooyinka ay Al-Shabaab weerarada iyo dilalka qorsheysan ka geystaan.
KISMAAYO, Soomaaliya – Maamulka Jubaland ayaa soo bandhigay rag la sheegay in ay ka tirsanyihiin Al-Shabaab, kuwaasoo weeraro iyo qaraxyo ka fuliyay xaafadaha magaalada Kismaayo.
Taliska Nabad Sugidda Jubaland ayaa soo bandhigay ragaan oo magacyadooda lagu kala sheegay Xasan Cabdi Ibraahim iyo Abukar Cabdi Yaxye, waxaana lagu soo qabtay howlgal ay Ciidamadu ka sameeyeen aagga jiinka Webiga ee Tuulada Yuuntoy.
Sidoo kale, Ciidanka ayaa warbaahinta gudaha u soo bandhigay Bambaanooyin iyo Miinooyin la sheegay in ay Kooxda Al-Shabaab ku duugatay xaafada Shaqaalaha, gaar ahaan Suuqa sariiraha ee Kismaayo.
Maamulka Jubaland ayaa sheegay in raggaan dhawaan Maxkamad la soo taagi doono, sidoo kalena ay ku daba joogaan xubno kale oo ka tirsan Al-Shabaab oo ku dhuumaaleysanayo xaafadaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose.
Bilowgii Bishan ayay aheyd markii weerar Bambaano ah xilli habeen ah lagu qaaday maqaayad ku taallo isgoyska Siinaay ee magaalada Kismaayo, kaasoo ay ku dhinteen 3 ruux, shan kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana mas'uuliyadda weerarkaas sheegatay kooxda Al-Shabaab oo dagaal kula jirta Dowladda Soomaaliya.
0 Comments Topics: al-shabaab jubaland kismaayo
Jubbaland sidee u aragtaa ansixinta heshiiska doorashadda?
Warar 26 September 2020 16:00
Axmed Madoobe ayaa si deg deg ah usoo dhaweeyay heshiiska ansixintiisa, isagoo ku tilmaamay go'aanka Baarlamanka mid taariikhi ah, oo horseedaya doorasho xor iyo xalaal u dhacda.
Mareykanka oo ka hadlay Qaraxii Kismaayo
Warar 12 September 2020 16:29